laacibfm.com » RASMI: Liverpool Oo Heshiiskii Ugu Horreeyey Ee Xirfadeed Ka Saxeexday Da&rsquo;yarkeeda Harvey Elliott & Qaabkii Uu Klopp Uga Hadlay
RASMI: Liverpool Oo Heshiiskii Ugu Horreeyey Ee Xirfadeed Ka Saxeexday Da&rsquo;yarkeeda Harvey Elliott & Qaabkii Uu Klopp Uga Hadlay
Liverpool ayaa heshiis ramsi ah oo xirfadeed la saxeexatay laacibkeeda da’da yar ee Havey Elliot oo bishii April ay da’diisu noqotay 17 jir.
Elliot ayaa sida uu sharcigu dhigayo aan hore usaxeexi karaynin heshiis xirfadeed oo rasmi ah, waxaanu ahaa laacibfm qandaraaskiisu aanu si buuxda sharci u ahayn sii saxeexay markii uu xagaagii hore Liverpool kaga soo biiray Fulham.
Tababare Jurgen Klopp ayaa heshiiska ciyaartoygan ku tilmaamay mid muhiim ah oo uu aad ugu faraxsan yahay, waxaanu caddeeyey inuu xubin muhiim ah ka noqon doono kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waa war lagu diirsado oo aan dhab ahaantii aad ugu farxay. Harvey waa ciyaartoy iftiimaya oo soo baxaya. Dhamaantayo waanu ognahay tayooyinkiisa, waxaananu ku aragnay xili ciyaareedkan kooxda koowaad iyo U23.
“Waxaan jecelahay dhaqankiisa, waxaan jecelahay dhiiranaantiisa, waxaan jecelahay geesinimadiisa, waxaan jecelahay xaddiga saxda ah ee kalsoonida kubadda cagta ee uu leeyahay”
Jurgen Klopp waxa uu sheegay in laga yaabo in dadku aanay aqoon wanaagsan u lahayn qofka uu yahay Harvey, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in dadku aanay wali dhab ahaan u garanayn Harvey, laakiin waa wiil wanaagsan, akhlaaq badan – qiimeeya hibada iyo fursadda uu helayo, kubadda cagtana jecel. Marka ugu horreysa wuxuu jecel yahay kubadda cagta, wuxuu ciyaarayaa daqiiqad walba iyo maalin walba haddii uu helayo – waxa kale oo uu jecel yahay kooxdiisa.”
Tababare Jurgen Klopp waxa uu ballan-qaaday in ciyaartoygan aanu culays saari doonin maadaama uu da’yar yahay, xirfaddiisuna ku jirto heerarkii ugu horreeyey ee koboca, laakiin ay tahay inuu horumar sameeyo, kana faa’iidaysto fursadaha la siiyo.